true suppression /zu-ZA/tools-for-life/suppression/steps/the-antisocial-personality.html quiz 1 11 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/suppression_zu_ZA.jpg Imbangela Yokucindezeleka
Kukuphi lapho ungavama ukuthola oyedwa noma ngaphezulu abanga Bantu Abangenabo Ubuntu besebenza? 0,1,2
Uma sibheka imbangela yebhizinisi elihlulekayo, sithola ukuthi, endaweni ethile kubasebenzi balo, uMuntu Ongenabo Ubuntu uyasebenza ngamandla.
Emindenini eyehlukanayo, imvamisa sithola ukuthi Umuntu Ongenabo Ubuntu uyabandakanyeka. Lapho impilo yomuntu seyiba yimbi futhi esehluleka, ukubukeza ngokucophelela kuzothola oyedwa noma ngaphezulu wabantu abanjalo besebenza.
Ibhizinisi elihlulekayo Umndeni obhidlikayo Lapho impilo yomuntu iba yimbi futhi esehluleka Umkhosi
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana Umuntu Ongenabo Ubuntu bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.